प्रकाशको गतिमा कारलाई गुडाउने र कारको अगाडिको बत्ती बाल्दाको स्थिति कस्तो देखिन्छ होला ? | RevoScience Nepali
Home /प्रकाशको गतिमा कारलाई गुडाउने र कारको अगाडिको बत्ती बाल्दाको स्थिति कस्तो देखिन्छ होला ?
प्रकाशको गतिमा कारलाई गुडाउने र कारको अगाडिको बत्ती बाल्दाको स्थिति कस्तो देखिन्छ होला ?
प्रमुख कुरा यो काल्पनिक प्रश्न हो । प्राय काल्पनिक प्रश्नको उतर सहि हुनेछैन । अनुमानको आधारमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म प्रकाशको गतिमा कुनै पनि बस्तु हिडेको छैन । तरपनि, त्यसरी जान सक्ने भनेको मासलेस पार्टिकलहरू (पिण्डरहित बस्तुहरू) नै जान सक्छ । जस्तैः फोटोन एउटा मासलेस पार्टिकल हो । यसरी ठूला बस्तुलाई प्रकाशको गतिमा हिडाउन अत्याधिक शक्ति चाहिन्छ । तवमात्र त्यो सम्वभ हुन्छ ।
कहीलेकाँही मानिसहरूले भन्ने गरेका छ, यदि फोटोनको रिभरेन्स फ्रेम (सम्वन्ध सिमारेखा)मा विश्वलाई कस्तो देखिन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि रहि आएको छ ।त्यतिखेरको फोटोनको अनुभव कस्तो हुन्छ ? के दुई दिशा एक संकुचित हुन्छ । के फोटोनको लागि समय रोकिन्छ ? यस्ता कुराको साँच्चैनै सम्भव हुन्छन् रअहिलेसम्मको अन्र्तविरोधको सामना गर्न सक्छन् । त्यस्तो इनर्सीयल फ्रेम नै छैन जहाँ फोटोनकोलागि मात्र स्थिर हुने । फोटोनले त्यस्तो अनुभव कदापी गर्नेछैन । यदि मानिस लाइटको गतिमा जाँदा समय रोकिन्छ भन्ने कुनै बौद्धिक कुरा हुनसक्दैन् । यसले आइन्सटाइनको सापेक्षबादको सिद्धान्त नै फेलखान्छ भन्ने छैन । यस्ता प्रश्नहरूमा कुनै तर्क नै हुदैन ।
यस्तो तर्कवाला प्रश्न आइस्टानइनले १६ वर्षको उमेर कल्पना गरेको थियो । उनले त्यसको दशवर्षपछि ‘स्पेशल थेउरी अफ रिलेटिभिटी’ पत्ता लगाउँदा समेतकसैले दिन सकेको थिएन । यो कुरा आइस्टाइनले १८९६ आएर खुलासा गरेको थियो ।
सन् १९०५ मा आइन्सटाइले के महशुस ग¥यो भने प्रकाश सधै उहि रफ्तार जान्छ र त्यसको अनुपातमा मानिस जतिनै छिटो गएता पनि खासै असर गर्दैन भनेर । एकै समयमा पनि फरक फरक घटना हुने हुँदा हामीले थाहा पाउने भएको अघिल्लो घटनाको आधारमा छिटो वा ढिलो भन्न सक्ने हो । यसकारण ‘स्पेश र टाइम’सुनिस्चित हुन सक्दैन ।
यदि हामीले प्रकाशको गतिको नजिकै गाडिलाई गुडाऔं भने उत्तर हुनसक्छ । कारभित्र मानिसले कुनै प्रकारको असर देख्दैन । तर मानिसले ऐनामा हे¥यो भनेकारसँग केहि दौडिएको देखिन्छ । यदि झ्याल बाहिर हेर्ने भनेको फरक कुरा हो ।
एउटै सम्वन्ध सिमारेखामा कारको हेडलाइटबाट आएको प्रकाश— प्रकाशको गतिसँगै जान्छ । त्यो अगाडिको कुनै बस्तुसँग ठक्कर खाइ परावर्तन हुन्छ । सवैबस्तु मानिसतिर आइरहेको जस्तो देखिन्छ । यदिखेर परावर्तित प्रकाशको ‘डप्लर इफेक्ट(प्रभाग) भने अत्याधिक ‘फिकेन्सी’ हुन्छ । त्यो पारावैजनी भन्दाटाढाको अवस्थाम रहन्छ । यतिखेरको अवस्थामा फोटो खिच्ने क्यामरा भएमा फोटो खिच्न मिल्नेछ । तर फरक समयको र असामान्यता असरको फोटो संकुचनहुने र घुमेरको जस्तो देखिन्छ ।